5 Mgbe ihe ndị a gasịrị, otu ememme+ ndị Juu ruru. Jizọs wee gbagoo Jeruselem. 2 Na Jeruselem, n’ọnụ ụzọ ámá atụrụ,+ e nwere otu ọdọ mmiri a na-akpọ n’asụsụ Hibru Betzeta, nke veranda ya nwere ahịrị ogidi ise. 3 N’ebe ndị a ka ìgwè ndị ọrịa, ndị ìsì, ndị akụkụ ahụ́ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, dina. 4 * —— 5 Ma otu nwoke nọ n’ebe ahụ, onye nọ na-arịa ọrịa kemgbe afọ iri atọ na asatọ. 6 Mgbe Jizọs hụrụ nwoke a ka o dina ala, ebe ọ makwaara na ọ nọworị na-arịa ọrịa ruo ogologo oge,+ ọ sịrị ya: “Ị̀ chọrọ ka ahụ́ dị gị mma?”+ 7 Onye ọrịa ahụ zara ya, sị: “Nna anyị ukwu, enweghị m onye ga-eme ka m banye n’ime ọdọ mmiri a mgbe mmiri a mere ụṅara; kama mgbe m na-abịa, onye ọzọ na-ebu m ụzọ abanye.” 8 Jizọs wee sị ya: “Bilie buru ihe ndina gị gawa ije.”+ 9 Ahụ́ wee dị nwoke ahụ mma ozugbo, o bukwaara ihe ndina ya wee malite ịga ije. Ụbọchị ahụ bụ ụbọchị izu ike.+ 10 Ya mere, ndị Juu malitere ịgwa nwoke ahụ a gwọrọ ọrịa, sị: “Taa bụ Ụbọchị Izu Ike, iwu akwadoghịkwa+ ka i buru ihe ndina gị.” 11 Ma ọ zara ha, sị: “Ọ bụ onye mere ka ahụ́ dị m mma sịrị m, ‘Buru ihe ndina gị gawa ije.’” 12 Ha jụrụ ya, sị: “Ònye bụ onye ahụ sịrị gị, ‘Buru ya gawa ije’?” 13 Ma nwoke ahụ a gwọrọ ọrịa amaghị onye ọ bụ, n’ihi na Jizọs esiwo n’ebe ahụ pụọ, ebe ọ bụ na e nwere ìgwè mmadụ n’ebe ahụ. 14 Mgbe ihe ndị a gasịrị, Jizọs hụrụ ya n’ụlọ nsọ wee sị ya: “Lee, ahụ́ adịwo gị mma. Emehiekwala ọzọ, ka ihe ka njọ ghara ime gị.” 15 Nwoke ahụ gara kọọrọ ndị Juu na ọ bụ Jizọs bụ onye mere ka ahụ́ dị ya mma. 16 N’ihi ya, ndị Juu malitere ịkpagbu+ Jizọs, n’ihi na ọ na-eme ihe ndị a n’Ụbọchị Izu Ike. 17 Ma ọ zara ha, sị: “Nna m anọwo na-arụ ọrụ ruo ugbu a, anọwokwa m na-arụ ọrụ.”+ 18 N’ihi nke a, ndị Juu malitere ịchọsi ike ka ha gbuo ya,+ n’ihi na ọ bụghị naanị na ọ na-ada iwu Ụbọchị Izu Ike kama ọ na-akpọkwa Chineke Nna ya,+ na-eme ka ya na Chineke hara.+ 19 Ya mere, Jizọs gara n’ihu ịza ha, sị: “N’ezie, n’ezie, ana m asị unu, Ọkpara ahụ apụghị ime otu mkpụrụ ihe n’uche nke aka ya, kama ọ bụ naanị ihe ọ hụrụ Nna ya na-eme.+ N’ihi na ihe ọ bụla Onye ahụ na-eme, ọ bụ ya ka Ọkpara ya na-emekwa. 20 N’ihi na Nna m hụrụ Ọkpara ya n’anya nke ukwuu,+ na-egosikwa ya ihe niile ya onwe ya na-eme, ọ ga-egosikwa ya ọrụ ndị ka ndị a ukwuu, ka o wee ju unu anya.+ 21 N’ihi na dị nnọọ ka Nna m na-akpọlite ndị nwụrụ anwụ ma na-eme ka ha dị ndụ,+ otú ahụ ka Ọkpara ya na-emekwa ka ndị ọ chọrọ dị ndụ.+ 22 N’ihi na Nna m adịghị ekpe onye ọ bụla ikpe ma ọlị, kama o nyefewo ikpe ikpe niile n’aka Ọkpara ya,+ 23 ka mmadụ niile wee na-asọpụrụ Ọkpara ya+ dị nnọọ ka ha na-asọpụrụ Nna ya. Onye na-adịghị asọpụrụ Ọkpara ahụ adịghị asọpụrụ Nna ya nke zitere ya.+ 24 N’ezie, n’ezie, ana m asị unu, Onye na-anụ okwu m ma kwere n’onye ahụ nke zitere m nwere ndụ ebighị ebi,+ ọ dịghịkwa aba n’ikpe kama o siwo n’ọnwụ gafere ná ndụ.+ 25 “N’ezie, n’ezie, ana m asị unu, Oge awa na-abịa, ọ bụkwa ugbu a, mgbe ndị nwụrụ anwụ+ ga-anụ olu+ Ọkpara Chineke, ndị ṅakwara ntị ga-adị ndụ.+ 26 N’ihi na dị nnọọ ka Nna m nwere ndụ n’ime onwe ya,+ otú ahụ ka o mere ka Ọkpara ya nwee ndụ n’ime onwe ya.+ 27 O nyewokwa ya ikike ikpe ikpe,+ n’ihi na ọ bụ Nwa nke mmadụ.+ 28 Ka ihe a ghara iju unu anya, n’ihi na oge awa na-abịa mgbe ndị niile nọ n’ili ncheta+ ga-anụ olu ya 29 wee pụta, ndị mere ezi ihe ga-enweta mbilite n’ọnwụ nke ndụ,+ ndị mere ajọ omume ga-enweta mbilite n’ọnwụ nke ikpe.+ 30 Apụghị m ime otu mkpụrụ ihe n’uche nke aka m; dị nnọọ ka m si anụ, otú ahụ ka m si ekpe ikpe; ihe m na-ekpe n’ikpe zikwara ezi,+ n’ihi na ihe m na-achọ ime abụghị uche nke m, kama ọ bụ uche+ onye zitere m. 31 “Ọ bụrụ na ọ bụ naanị m na-agba àmà+ banyere onwe m, àmà m abụghị eziokwu.+ 32 Ọ dị onye ọzọ na-agba àmà banyere m, amakwaara m na àmà ọ na-agba+ banyere m bụ eziokwu. 33 Unu ezipụwo ndị mmadụ ka ha gakwuru Jọn, ọ gbawokwa àmà banyere eziokwu ahụ.+ 34 Otú ọ dị, adịghị m anabata àmà nke si n’aka mmadụ, kama m na-ekwu ihe ndị a ka e wee zọpụta unu.+ 35 Onye ahụ bụ oriọna na-enwu enwu ma na-enye ìhè, ọ bụkwa ruo nwa oge ka unu chọrọ ịṅụrị ọṅụ nke ukwuu n’ìhè ya.+ 36 Ma m nwere àmà ka nke Jọn ukwuu, n’ihi na ọ bụ ọrụ ndị ahụ Nna m kenyere m ịrụ, bụ́ ọrụ ndị m na-arụ,+ na-agba àmà banyere m na ọ bụ Nna m zitere m. 37 Nna nke zitere m agbawokwa àmà n’onwe ya banyere m.+ Unu anụbeghị olu ya mgbe ọ bụla ma ọ bụkwanụ hụ ọdịdị ya;+ 38 okwu ya adịghịkwa n’ime unu, n’ihi na unu ekweghị n’onye ahụ o zitere. 39 “Unu na-enyocha Akwụkwọ Nsọ,+ n’ihi na unu chere na ọ ga-eme ka unu nwee ndụ ebighị ebi; ọ bụkwa ya na-agba àmà banyere m.+ 40 Ma unu achọghị ịbịakwute m ka unu wee nwee ndụ.+ 41 Adịghị m anabata otuto si n’aka mmadụ,+ 42 kama amaara m nke ọma na unu enweghị ịhụnanya Chineke n’ime onwe unu.+ 43 Abịawo m n’aha Nna m,+ ma unu anabataghị m; ọ bụrụ na onye ọzọ abịa n’aha onwe ya, unu ga-anabata ya. 44 Olee otú unu pụrụ isi kwere, mgbe unu na-anara otuto+ n’aka ibe unu, unu adịghịkwa achọ otuto nke si n’aka onye ahụ naanị ya bụ Chineke?+ 45 Unu echela na m ga-ebo unu ebubo n’ihu Nna m; ọ dị onye na-ebo unu ebubo, ọ bụ Mozis,+ onye unu nwere olileanya n’ebe ọ nọ. 46 N’eziokwu, ọ bụrụ na unu kweere Mozis, unu gaara ekwere m, n’ihi na o dere banyere m.+ 47 Ma ọ bụrụ na unu ekwereghị ihe o dere,+ olee otú unu ga-esi kwere okwu m?”